Manchester City oo aan ka fekereyn Guardiola inta ay sugeyso PSG | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Manchester City oo aan ka fekereyn Guardiola inta ay sugeyso PSG
Manchester City oo aan ka fekereyn Guardiola inta ay sugeyso PSG
Posted by: radio himilo April 12, 2016
Cayaartoyda Manchester City ayaa ku qasban inaanay ka fekerin qorshaha macallinkooda xiga Pep Guardiola, waana inay hubiyaan u soo bixidda wareega xiga ee Champions League oo ay ka xigto inay foodsaaraan PSG oo u soo martin doonta, waana sida uu qabo laacibkooda Fernandinho.
Guardiola ayaa shaqada kooxda Etihad ka dhisan kala wareegi doona Pellegrini dhammaadka xagaagan, cayaartoy badan ayaana dadaal ugu jira inay tusiyaan macallinka reer Spain inay u qalmaan helidda boosas joogto ah.
Fernandinho oo qadka dhexe uga dheela kooxdan ayaase qaba in kooxdu ay muhiim u tahay inay ka fekeraan qaabkii ay uga talaabsan lahaayeen PSG oo markii ugu horeysay iskaga xaadirin lahaayeen wareega afar dhammaadka Champions League.
Manchester City ayaa barbaro 2-2 ah la soo gashay PSG toddobaadkii tegay markii ay booqatay caasimadda Paris, waana kooxda ugu cadcad kulanka labada kooxood caawa ku dhexmari doonaa gegada Etihad Stadium.
Previous: Shelvey oo aan ka socon Newcastle United haddii ay u dhaadacdo heerka hoose